Ry sakaiza, mitràkà;
Aoka tsy hanana ahiahy.
Mainka mantsy ho azon-tory.
Ry sakaiza, tena tiana;
Ilay Fitia, aza ihafiana.
Mainka aza izahao!
Fa natolony ny Zanany
Ho avotra hisolo anao.
Ilay tokana ananany;
Paska, hamonjena anao.
Ry sakaiza ‘ndeha banjino;
Lay fahasoavany isikino.
Ndrao variana miavo-tena.
Ry sakaiza, andrandrao,
Ireto masonao hijery.
F’ilay Fitiavany anao,
No hany tokana tsy hahavery.
Ozona ho anao ny ho faty,
Noho ny ota rehetra atao.
Jesosy niaiky voabaty;
Kosa Paska ho anao.
Ry sakaiza, mifalia;
F’efa voavonjy ianao.
Ka miomana dia avia.
Havaozy ilay batisanao.
Ry sakaiza, midiova.
Tsy ho voazona intsony.
Fa ny Fanahy no manova,
Ny fonao ho lasa fony!
Ilay Paska ifaliana;
F’eo ny otanao no ariana.
Eny an-drahon-danitra eny,
Aoka tsy hiraikiraiky;
Hitafy ilay Fitia nomeny.
Ho olona manetry tena;
Hanompo ny hafa sy hanasoa.
Raiso Izy, aza fefena.
Tsy ho tsiaro fotsiny ihany,
Izany Paska izany.
Ho fanavotana tokoa.
Fa tsisy hafa mahavonjy.
Mantsy ny Tompo zay nilonjy,
No hany anananao ny Fiainana
Koa alalaho ny fisainana.
Fa tsisy hafa tena tia.
Mantsy Jesosy no ninia,
Namoy ny ainy noho ianao.
Koa raiso Izy sy hajao!
Paska ho antsika
Ilay fitia tsy mba ho ritra.
Mandra-piala ity tany
Tsiahivo foana izany!
Auteur : Rindramalala Rafanomezantsoa
Source : http://www.tononkalomirindra.com